१४ वर्ष जेल बसेका केपी ओली त यो देशको प्रधानमन्त्री भएर वाहवाही कमाए भने मैले केही गर्न सक्दिनँ भन्ने कारण के छ ? — Cyber Headline
१४ वर्ष जेल बसेका केपी ओली त यो देशको प्रधानमन्त्री भएर वाहवाही कमाए भने मैले केही गर्न सक्दिनँ भन्ने कारण के छ ?
२३ वर्षको उमेरमा १५ वर्षको जेल सजाय र पाँच लाख जरिवान सुने र पनि नआती आफ्नो सपना जेल भित्रबाट नै पुरा गरेका छन् । २०६७ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले लागूपदार्थ बेचबिखनको अभियोगमा फैसला गर्दा थापाले पुर्पक्षमै लगभग साढे चार वर्ष कारागार जीवन बिताइसकेका थिए । लागूपदार्थ बेचबिखनको आरोपमा बानेश्वरबाट पक्राउ परेका लक्ष्मणको उमेर त्यतिबेला १९ वर्ष मात्रै थियो । त्यसयता उनले जेलबाहिरको संसार देखेका छैनन् । नक्खु कारागारमा रहेका उनले भने, “घरको एक्लो छोरा मेरो परिवारलाई समाजको कति भनाई खानु पर्यो होला, मैले अनुमान पनि गर्न सक्दिन । मेरो परिवारले चिन्ता हुदा हुदा पनि मलाई सन्तोवना दिनु भयो जो हुन भयो अब आफ्नो पढाईलाई निरन्तरता देउ ।
लक्ष्मण अहिले किताबको एडिक भएका छन् । जेलबाटै स्नातकदेखिको पढाइ अगाडि बढाएका लक्ष्मणले राजनीतिशास्त्र, इतिहास, ग्रामीण विकास र समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरिसकेका छन् । समाजशास्त्रमा शोधपत्र लेख्न बाँकी छ । यी सबै विषय उनले प्रथम श्रेणीमा नियमित पास गरेका हुन् ।
समाजशास्त्रमा शोधपत्रको अंकबाहेक उनले ५९ प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याएका छन् । अहिले कल्चरमा स्नातकोत्तर दोस्रो वर्षको परीक्षा दिने तयारी गर्दैछन् । पहिलो वर्षमा ५९ प्रतिशत अंक ल्याए । मेजर इङ्लिस र पपुलेसनमा पनि स्नातकोत्तर भर्ना भइसकेका छन् उनी । ‘जेल आउनेबित्तिकै राजनीतिशास्त्र र इतिहासमा स्नातकमा भर्ना भएँ । त्यसपछि क्रमशः दुवै विषयमा स्नातकोत्तर गरें । त्यसपछि ग्रामीण विकास र समाजशास्त्रमा’, उनले भने । समाजशास्त्रमा थेसिस लेख्नैपर्ने भएकाले बाँकीमा भने उनले थेसिसको ‘अपसनल’ खोजे । पेपर नै दिए । उनलाई लाग्छ, जेल आएपछि पढ्न सिकें, पढाइभन्दा माथि धेरै कुरा बुझें ।
तर अचानक लागूपदार्थ बिक्री गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको भन्दै ममाथि मुद्दा चलाइयो । म लागूपदार्थ सेवन गर्थें । तर लागूपदार्थ बिक्री गर्दै हिँड्नुपर्ने मेरो पारिवारिक अवस्था थिएन । मलाई कसले फसायो, अझै बुझ्नसकेको छैन ।
उनले लामो समय आस मारेनन् जबसम्म मुद्दा जिल्ला अदालतमै थियो । उनलाई लागेको थियो फिल्ममा जसरी उनले पनि अदालतमा न्यायाधीशसामु बयान दिन पाउनेछन् र फैसला हुनेछ । ‘तर मैले त पेसीबारे जानकारी नै नपाईकन फैसला भयो’, उनको गुनासो छ । ९९ ग्राम वा त्यसभन्दा कम ब्राउनसुगर बरामद भएको अवस्थामा उनलाई अधिकतम १० वर्ष जेल र ७५ हजार जरिबाना फैसला हुने थियो । उनले पुनरावेदनमा पनि मुद्दा हारे । सर्वोच्चमा ६ वर्षअघि गएको मुद्दामा भने फैसला हुन बाँकी छ ।
‘तर म जेल परिसकेको थिएँ । दिमागमा अनेक कुरा खेल्थे । उत्तिकै रिस पनि उठ्थ्यो । मैले आफूलाई शान्त बनाउनुको विकल्प थिएन’, उनले भने । अधिकतम समय पढ्न थाले । उनको ध्यान पढाइमा मात्र केन्द्रित हुन थाल्यो । उनकै शब्दमा ‘पढाइले ध्यान डाइभर्ट गर्यो । यसरी पढाइको एडिक्ट भएँ ।’ अचेल दैनिक औसत पाँच घन्टा पढ्ने गरेका छन् उनले । ‘त्यत्तिकै बस्दा दिमागमा अनेक कुरा खेल्नु स्वाभाविक थियो । त्यसैले पढ्न थालें । पढाइ थेरापीजस्तै भयो । वास्तवमा सुरुमा किन पढ्दै छु भन्ने पनि थाहा थिएन । तर पछि अरू काम पनि नहुँदा पढाइमै ध्यान केन्द्रित हुन थाल्यो’, लक्ष्मणले भने ।
लक्ष्मणलाई जेलभित्रै बसेर एउटै विषयमा स्नातकोत्तर गर्नु पनि सजिलो थिएन । तर उनलाई परिवारले निकै ठूलो सहयोग गर्यो । साथीभाइले पनि साथ दिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ‘लेक्चरर’ ले पनि साथ दिए । ‘कुन विषय पढ्ने भन्नेमा म सरहरूसँग कुरा गर्छु । केहीले जेलबाट फोन गरेको भनेर फरक व्यवहार पनि गर्छन्, त्यो थाहा भइहाल्छ ।
‘ऐननियममा त्यस्तै व्यवस्था होला । तर मैले जेलमा बस्नेमध्ये उदाहरण बन्न खोजेको हुँ । मैले आममानिसलाई सन्देश दिन खोजेको हुँ । जेलभित्रको पढाइले मानिसलाई सम्भावित नकारात्मक सोचाइ र तनावबाट मुक्त गराउँछ’, उनले थपे । उनले एमफिल तथा विद्यावारिधि गर्न पाऊँ भनेर अदालतमा पनि निवेदन दिएको तर कुनै निर्णय नआएको सुनाए । लागूपदार्थलगायत अन्य केही अपराधमा कैदीले तोकिएको कैद अवधि पूरा समय बस्नैपर्ने हुन्छ ।
उनि भन्छन् ‘जेलमा हुँदासम्म त मैले समाजको कुरा सुन्नु र हेर्नुपरेको छैन । मान्छेहरूले मेरैसामु कुरा काट्लान्, कलंक हो भन्लान् । परिवारले पनि आश मारिसक्नुभएको थियो होला । पढेकाले छोराले काटेको नाक जोड्छ भन्ने आशा उहाँहरूको होला । मलाई विश्वास छ, समाजमा म रिकभर हुनेछु’, उनको विश्वास छ ।
उनले परिवारलाई भन्छन् ‘१४ वर्ष जेल बसेका केपी ओली त यो देशको प्रधानमन्त्री भएर वाहवाही कमाए भने मैले केही गर्न सक्दिनँ भन्ने कारण के छ ? ‘ अहिले उनलाई पढाइकै चिन्ता छ । फागुन २७ देखि सुरु हुने कल्चर विषयको स्नातकोत्तर दोस्रो वर्षको परीक्षा तयारीमा जुटिरहेका छन् उनी । उनले भने, ‘मेरो उद्देश्य पढेका सबै विषय प्रथम श्रेणीमा पास गर्ने हो ।